LG G3 ပြproblemsနာ၊ LG G3 ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်လှည့်ကွက်နှစ်ခု Androidsis
ပါပလော Aparicio | | Android Root ပါ, LG, လဲ tutorial
နောက်တကြိမ်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမယ် XDA Developers မှလူများကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်သောစိတ်မဝင်စားလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြ အသုံးအများဆုံးပြproblemsနာများမှအဖြေများ ငါတို့ပစ္စည်းတွေမှာရှာတွေ့နိုင်တယ် ရှည်လျားသောအမှတ်တံဆိပ်သူတို့ကိုယ်သူတို့မတိုင်မီ.
ဒီကိစ္စမှာမင်းကိုဖြေရှင်းနည်းနှစ်ခုတင်ပြပါ့မယ် root user ဖြစ်စရာမလိုဘဲ LG G3 ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအဖြေတစ်ခု ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအမြင့်ဆုံးမှအရောင်ကိုသက်ဝင်စေ ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုလတံ့သောအပူချိန်နှင့်အခြား LG G3 ခံစားခဲ့ရသည့်ဆိုးဝါးသောနောက်ကျသွားအောင်ဖယ်ရှားပေးပါ အရင်းအမြစ်တွေအများကြီးရှိတဲ့ pixel ကင်မရာထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ 4k recording ရှိတဲ့ဒီနောက်ဆုံးမျိုးဆက် terminal တွေ၊ သင်မသိခဲ့ရင်သူတို့တကယ်ပူလာတယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် XDA ကလူတွေကသူတို့ရဲ့ဖိုရမ်ထဲမှာရှင်းပြတာကိုသတိပြုပါ ၎င်းသည်လုံးဝလုံခြုံသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်ငါပြောရမည်မှာဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူကြသော်လည်း၎င်းတို့သည်တူညီသောပုံစံနှင့်ပုံစံရှိသော်လည်း။ ဒီနဲ့အတူငါမင်းကိုပြောချင်တယ် ဒီအကြံပြုချက်နှစ်ခုကိုလုပ်ဖို့မကြောက်ပါနဲ့ တစ်ချိန်ကလျှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့ငါမင်းကိုနောက်ထပ်ပေးမယ် သင်၏ terminal ကိုသတိပြုမိပြီးအလွန်အကျွံအပူမပေးကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ငါအလွန်အကျွံပြောသောအခါ, ငါဆိုလိုတာကသူကယခုအပူတက်သည်ထက်ပိုမိုအပူမပေးပါဘူးဆိုလိုတာက, ထိုအမှု၌, သငျသညျဖြစ်စဉ်ကိုပြောင်းပြန်ရပါလိမ့်မယ်, အစအ ဦး မှာဖြစ်သကဲ့သို့အရာအားလုံးကိုချန်ထားနှင့်ကိစ္စဖြေရှင်းပြီး။
1 ပထမ ဦး ဆုံးအစွန်အဖျားသို့မဟုတ် Mod, အပူချိန်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအမြင့်ဆုံးမှအရောင်ကိုသက်ဝင်ဖို့ဘယ်လို
2 Terminal မှပူလာသောအခါနှောင့်နှေးခြင်းကိုမည်သို့ရှောင်ရမည်နည်း
3 အကြှနျုပျ၏ LG G3 သူ့ဟာသူပြန်လည်စတင်
4 LG G3 သည်သူ့ဟာသူပိတ်သွားသည်
4.3 LG G3 operating system ကို update လုပ်ပါ
4.4 SD ကဒ်ကိုဖယ်ရှားပါ
6 ကျွန်ုပ်၏ LG G3 တက်လာသည်
7 LG G3 အတွက်ဘက်ထရီကိုဝယ်ပါ
ပထမ ဦး ဆုံးအစွန်အဖျားသို့မဟုတ် Mod, အပူချိန်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအမြင့်ဆုံးမှအရောင်ကိုသက်ဝင်ဖို့ဘယ်လို
ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G3 ၏ dialer ထဲသို့ ၀ င်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုမီနူးကိုပြမည့်ဤကုဒ်ကိုအမှတ်အသားပြုသည်။ ၎င်းမှအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော mods နှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ activate လုပ်ရမည်။
ဖုန်းခေါ်ရန်ကုဒ်သည် 3845 # * 855 #, အမှတ်အသားပြုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည် option ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သော service screen ကိုပြလိမ့်မည် မြင့်မားသောအပူချိန်အိမ်ခြံမြေ OFF ကျွန်ုပ်တို့၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုသက်ဝင်စေသည်။ ပြီးပြီဆိုရင် terminal ကို restart လုပ်ရမယ် လုံးဝကပိတ်ထား နှင့်၎င်းကိုမဖွင့်မီတစ်မိနစ်ခန့်စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်၎င်းကိုဖွင့်ပြီးသော့ခတ်မြင်ကွင်းသို့မဟုတ် PIN မျက်နှာပြင်ကိုပြသသောအခါ၊ အခြားတစ်မိနစ်မျှမထိဘဲအနားယူပါထို့နောက်၎င်းကိုသော့ဖွင့်ပြီး PIN နံပါတ်ကိုထည့်နိုင်သည်။
ဤလှည့်ကွက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ terminal သည် ၄ ​​င်းသည်အပူစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်အလင်းအားလျော့နည်းသွားစေသည်မဟုတ်ပါ။
မသန်စွမ်း သိသိသာသာလျှော့ချခံရထံမှပရိုဆက်ဆာမြန်နှုန်းတားဆီး LG G3 အကြောင်းလူအများပြောနေသည့် Lag သည် terminal သည်အပူလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ကုဒ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားပြသောလျှို့ဝှက် settings menu တွင်ကြည့်ပါ။ အပူ Daemon လျှော့ချရေး OFF, ငါတို့ယခင်ကလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့, အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သက်ဝင်လိမ့်မည်။
များအတွက် option ကို၌ရှိသကဲ့သို့ အပူချိန်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲမျက်နှာပြင်တောက်ပကိုသက်ဝင်ထပ်မံမဖွင့်မီတစ်မိနစ်စောင့်ဆိုင်းခြင်းဖြင့် terminal ကိုပြန်လည်စတင်ရန်လိုသည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ တစ်ကြိမ်ဖွင့်ပြီးသည့်နောက်၊ မည်သည့်အရာမျှမထိဘဲအခြားမိနစ်ကိုချန်ထားလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ PIN နံပါတ်ကိုထည့်သည်။
ဒီရိုးရှင်းတဲ့လှည့်ကွက်နှစ်ခုကငါတို့မှာရှိလိမ့်မယ် LG G3 သည်အကောင်းဆုံးတောက်ပမှုရှိသည် အချိန်တစ်ခုချင်းစီကိုလျှော့ချခြင်းမရှိဘဲသင်သည်အပူချိန်အလွန်အကျွံကိုလည်းသတိပြုမိသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုဆက်ဆာ၏ပုံမှန်အမြန်နှုန်း အပူမပါဘဲ quad-core ။
အပြီးသတ်ဖို့၊ ဒီကုဒ်တွေကိုပြောပြပါ သူတို့ဟာ LG G3 terminal မှာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စမ်းသပ်ခဲ့ကြပြီ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့သူတို့အတော်အသင့်အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီ Mods တွေကိုမဖွင့်ခင် Terminal ကထက်အပူပိုမြင့်တဲ့အပူကိုကျွန်တော်သတိမပြုမိခဲ့ဘူး။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ပြောရလျှင်နောက်ဆုံး၌ရရှိသောနောက်ဆုံးသတင်းများထက်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော LG terminal မှပိုမိုသောအရာများရရှိရန်ယခုကျွန်ုပ်တို့တွင်လှည့်ကွက်နှစ်ခုရှိသည်။ ကုမ္ပဏီကောင်းစွာ shit တက်လွဲချော်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အလုပ်မလုပ်နိုင်အောင်အမြန်ဆုံး OTA မှတဆင့်အခြား update တစ်ခုဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြပါစို့။
မှတ်စု: ဒီမှာပြထားတဲ့ကုဒ်က LG က G3 ကိုနိုင်ငံတကာမော်ဒယ် D855 များအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အခြား LG G3 မော်ဒယ်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကုဒ်များကိုရရှိရန်အတွက်တရားဝင် XDA ချည်ကိုအသုံးပြုပါ။
အကြှနျုပျ၏ LG G3 သူ့ဟာသူပြန်လည်စတင်
LG ထက် သူ့ဟာသူ reboot ၎င်းသည်များစွာသောအရာများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်၊ အများစုမှာကျပန်းမီးခိုးမြူများနှင့်တိုက်ဆိုင်နေသည်။ ဒါပေမယ့် AT&T ဖိုရမ်တွေမှာတွေ့ရတဲ့အဖြေကိုငါတို့စမ်းကြည့်နိုင်တယ်။
ကျွန်တော် Menu / My applications ကိုထိပါမယ်။ ရရှိနိုင်မွမ်းမံမှုများနှင့်အတူ applications များ "Update ကို" နဲ့မှတ်သားနေကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Menu ကိုနှိပ်ပြီး Auto-update သို့မဟုတ် "Auto-update" ဘေးတွင်ရှိသည့် box ကို check လုပ်ပါ။
အကယ်၍ ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါက၊ အောက်ပါကဏ္Theတွင်ဖော်ပြထားသော "LG G3 သည်သူ့ဟာသူပိတ်သွားခြင်း" ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ရန်ကောင်းသည်။
LG G3 သည်သူ့ဟာသူပိတ်သွားသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G3 နှင့်ရှာတွေ့နိုင်သည့်ပြနာတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပိတ်ပစ် ဒါကြောင့်နေဆဲဘက်ထရီပါဝါရှိပါတယ်အခါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပြproblemနာကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရပါကအောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
၎င်းသည်မိုက်မဲဟန်ရှိသော်လည်းဖြစ်နိုင်ချေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်တော့မည်။ ပစ္စည်းပိတ်ထားခြင်းသည်၎င်းသည်၎င်း၏ဘက်ထရီအခြေအနေဆိုးရွားနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဘက်ထရီဖြုတ်တပ်ခြင်းခံရပါကပထမဆုံးမှားယွင်းစွာကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်မှာ၎င်းကိုထားရန်ဖြစ်သည်။ အဆက်အသွယ်ကောင်းကောင်းမလုပ်နဲ့။ ၎င်းသည်စစ်ဆေးရန်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘက်ထရီကိုဖယ်ထုတ်မည်၊ အရာအားလုံးတည်ရှိနေသည်ကိုစစ်ဆေးပြီး၎င်းပြourနာကိုဖြေရှင်းပြီးပြီလားစစ်ဆေးမည်။
အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့မှအလိုအလျောက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများကိုရှောင်ရှားရန်စီမံထားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် တည်နေရာဝန်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ပါ LG က G3 ၏။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ငါတို့ကသာလုပ်ရမယ်။
ကျနော်တို့ device ကို settings ကိုဖွင့်လှစ်။
switch ကို deactivate လုပ်တယ်။
သတိပြုရမယ်၊ ငါတို့ရပ်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းနှင့်အတူဥပမာအားဖြင့်မည်သည့် GPS navigator ကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုများကို Strava သို့မဟုတ်အခြားအားကစားအက်ပလီကေးရှင်းများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သွားနေသောလမ်းကြောင်း၊ အမြန်နှုန်းကိုတွက်ချက်ခြင်းစသည်တို့ကိုအတိအကျဖြစ်စေရန်တားဆီးလိမ့်မည်။
LG G3 operating system ကို update လုပ်ပါ
LG သည်၎င်း၏ G3 ကျပန်းပိတ်စနစ်ပြproblemနာကိုသိရှိသောအခါ update ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ဆော့ဗ်ဝဲ, ဒါကြောင့်ဖုန်းကိုမွမ်းမံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ငါတို့လုပ်သည်:
ရဲ့ settings ကိုသွားကြကုန်အံ့။
ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ကိရိယာအကြောင်း” ကိုနှိပ်ပါ။
ဆော့ (ဖ်) ဝဲအပ်ဒိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထိပြီး၊ အကယ်၍ အသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုရှိပါက၎င်းကိုဤနေရာမှထည့်သွင်းလိုက်ပါ။
တစ်ခါတစ်ရံမကောင်းသော SD ကဒ်သည်ပြproblemsနာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးအများဆုံးမဟုတ်သော်လည်းဘက်ထရီနည်းတူ SD ကဒ်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးပြgoneနာပျောက်သွားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်သည်။
မကောင်းသော SD ကဒ်သည်ပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သကဲ့သို့ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော software သည်လည်းပြalsoနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ “ အဂတိလိုက်စား” ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပြmanyနာများစွာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်အလေ့အကျင့်တစ်ခုမှာစက်ကိုပြန်လည်ထားရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။
Backup and Reset ကိုနှိပ်ပါ။
ကျနော်တို့ကစားခဲ့ပါတယ် ပြန်လာပြီ ထည်၏။
နောက်ဆုံးတွင် OK ကိုနှိပ်ပါ။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုဖြစ်စေရန်ကောင်းသောတိုတောင်းသော circuit တစ်ခုကဲ့သို့မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G3 သည်ကျပန်းပိတ်ထားခြင်းမှာaကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် မကောင်းတဲ့ဘက်ထရီဒါကြောင့်ဖြေရှင်းချက်ကောင်းတစ်ခုကအဲဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။
မပြောင်းခင်, yeah တစ်ယောက်ယောက်ကိုငါတို့သိတယ် အခြား LG G3 နဲ့အတူငါတို့လုပ်နိုင်တယ် သင့်ဘက်ထရီသည်ကျွန်ုပ်တို့စက်ပစ္စည်းတွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ ၎င်းပြdoesနာရှိပါကပြproblemနာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီနှင့်ပြသနာအသစ်တစ်ခုအတွက်ပြသရန်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
ကျွန်ုပ်၏ LG G3 တက်လာသည်
အခြားမျှတသောပြcommonနာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းဘဝရှိအရာအားလုံးကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြေရှင်းရန်အရာများစွာကိုကြိုးစားနိုင်သည်။ ဥပမာ -
operating system ကို update လုပ်ပါ။ ၎င်းသည် operating system ကိုအမြဲတမ်းလိုလို (လုနီးပါး) ဖြစ်ပြီးဘက္ထရီ၊ ဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ်အပူလွန်ကဲမှုပြexperienceနာများကြုံရသောအခါ၎င်းသည် ပို၍ အရေးကြီးသည်။
LG G3 ကိုပြန်ထားပါ။ များသောအားဖြင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပြproblemsနာများနှင့်အတူအလုပ်မလုပ်သောနောက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမှာစက်ကိုပြန်ယူရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် LG G3 တက်လာလျှင်အရေးကြီးသောအချက်အလက်အားလုံးကိုသိမ်းဆည်းပြီးမိုဘိုင်းကိုပြန်ယူနိုင်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်အရန်ကူးခြင်း (ဟုတ်ကဲ့အချက်အလက်) ကိုပြန်လည်မရယူရန်အကြံပြုလိမ့်မည်
လက်ဖြင့်တောက်ပမှုကိုလျှော့ချပါ။ အပူလွန်ကဲမှုအလွန်မြင့်မားခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံနေရသောအရာသည်အခြားအရာအားလုံးထက်အာရုံခံစားမှုသို့မဟုတ်အရူးအမူးဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် LG G3 ၏မျက်နှာပြင်အရောင်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ အကယ်၍ အပူချိန်ပုံမှန်ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemနာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းထက်ကျွန်ုပ်တို့ ဦး ခေါင်း၌ ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်။
LG G3 ကို ၁၀-၁၅ မိနစ်စောင့်ပါ.
LG G3 အတွက်ဘက်ထရီကိုဝယ်ပါ
ပစ္စည်းတစ်ခုရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ ဖြုတ်လို့ရတဲ့ဘက်ထရီဖြေ - အဟောင်းကကျွန်တော်တို့ကိုပြproblemsနာဖြစ်ရင်ဘက်ထရီအသစ်ရှာရတာအတော်လေးလွယ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီတွေ ၀ ယ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အွန်လိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းများစွာရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကိုယ်တိုင် Amazon ကိုအရင်ကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ထားသောအရာနှင့်မရောင့်ရဲပါကကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးနိုင်သမျှအကောင်းဆုံးအာမခံချက်ပေးသည့်စတိုးဆိုင်အကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
Amazon ကိုကြည့်ခြင်းကကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီရဲ့အတွေးအမြင်၊ မှတ်ချက်ပုံစံတွေထဲမှာမြင်နိုင်တဲ့အမြင်တွေကိုမြင်နိုင်လို့ပါ။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပြုရမည့်အချက်များတွင်မှတ်ချက်များတွင်“ Verified Purchase” အမှတ်အသားရှိမရှိစစ်ဆေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသူသည်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ပြီး Amazon တွင်ပြုလုပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါရွေးချယ်စရာများကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အချို့သောစွမ်းရည်များမှာ
Perfine Li-ion တိုးချဲ့ထားသောအစားထိုးဓာတ်ခဲ 6000mAh.
Mbuynow 9600mAh လီယွန်းဘက်ထရီ.
Perfine BL-53YH Li-ion ဘက်ထရီ 6000mAh.
မကောင်းတဲ့ ၀ ယ်ယူခြင်းကကျွန်တော့်အပေါ်ကျဆင်းသွားတာကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး၊ ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာက LG G3 အတွက်အမျိုးမျိုးသောဘက်ထရီများကိုအီလက်ထရွန်းနစ်စတိုးဆိုင်များတွင်ရှာတွေ့နိုင်သည်မှာသင်နှင့်အတူရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကိုသေချာစေရန်ကွဲပြားခြားနားသောတည်ထောင်မှုများကိုကြည့်ရှုရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G3 ပြProbleနာများ - Root မရှိပဲ LG G2 စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်း ၂ ချက်
ဒီလို terminal တစ်ခုနဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ငါအရမ်းစိတ်ပျက်မိတယ်။
terminal ကိုလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအထိကြီးကျယ်သည်ကိုသတိရပါ၊ အသစ်သောလက်ခံရရှိထားသည့် update အသစ်နှင့်အဆင်ပြေသည်မဟုတ်ပါ။ OTA မှတစ်ဆင့်အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်အဖြေတစ်ခုအားအကောင်အထည်ဖော်ရန်၎င်းတို့သည်ကြာမြင့်စွာမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့စောင့်ကြည့်ရမည်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ် lg g3 stilus ကို update လုပ်ပါ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်မွမ်းမံလိုက်သည်နှင့်၎င်းသည်ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်ကိုဖတ်။ မတူညီသောမှတ်ဥာဏ် (၁၀) ခုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းမပြုပါ။ အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ် ၀ ယ်လိုက်သည်နှင့်ထုတ်ယူ။ မရခဲ့ပါ။ ငါမှတ်ဥာဏ်ကိုထုတ်ယူခဲ့တယ်၊ ဖုန်းကိုလေ့လာဖို့အသုံးပြုပြီးကတည်းကငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ သင်ငါ့ကိုစာနဲ့ပို့စာတွေကိုကြိုတင်ဒေါင်းလုပ်ချလို့မရဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟင်နရီ Ovalles ဟုသူကပြောသည်
ဟစ္စကိုစကို၊ ကျွန်ုပ် LG g3 ကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်၊ ​​မင်းငါ့ကိုဘာအကြံပေးမလဲ။
ဟင်နရီ Ovalles ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ lg g2 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ် d802 နှင့် 32 gb မော်ဒယ်များအတွက်ဆုံးဖြတ်မယ်လို့မီ။ သူက LG G3 ကိုအကြိမ်တစ်ထောင်ကန်တယ်။
ရီကာဒို Burgundy ဟုသူကပြောသည်
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်၊ လျှို့ဝှက်မီနူးကိုရိုက်ထည့်ပြီး knock on mode ကိုပိတ်ထားပုံရှိသည်၊ ယခုတွင်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့ထပ်မံအသက်သွင်းမည်နည်း။
ငါကြိုးစားပြီးပြီ၊ လျှို့ဝှက်မီနူးထဲ ၀ င်သည်။ ၎င်းကို activate လုပ်ပါ၊ ပိတ်ပါ၊ တစ်မိနစ်လောက်ထားပါ၊ ဖွင့ ်၍ ၎င်းသည်အခြားတစ်မိနစ်အနားယူပါ။ အတူတူဆက်လုပ်ပါ။ ပီရူးမှကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ Terminal solutions အတွက် wsp group ရှိသလား။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း lg g3 d850 သည်ကျွန်ုပ်တွင်အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များအားလုံးအနက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးစမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်
ငါ 10g အနုပညာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောနှင့်အတူသွားပါ။
အမှန်တရားကတော့၊ ငါနားမလည်တာ၊ လူတွေအလွယ်တကူပျောက်ကွယ်နိုင်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့်လူတွေ android နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်မလဲ။ အကယ်၍ အဓိကအချက်အချာကျသောအနိမ့်ဆုံးအကွာအဝေးရှိပါက။ Terminal ကအထင်ကြီးစရာကောင်းပေမယ့်နှေးနှေးဆော့ဖ်ဝဲစသည်တို့ဖြင့်သင့်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားတွင်ထားရှိသည်
သူတို့ကို simpleCadsad ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပြန်ပို့ပါ
Pedro Saez တောင်တန်း ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ငါလုပ်ပြီးပြီ၊ ဒါပေမယ့်ငါမက်ဆေ့ခ်ျမရခဲ့ဘူး၊ terminal မှာအပူချိန်အရမ်းများလာတယ်၊ ဒါကမင်းရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပိတ်သွားလိမ့်မယ်။ အဲဒီနောက်ငါမသိဘူး။
Pedro Saez Montañaအားစာပြန်ပါ
ငါ Francisco ကိုမင်းသဘောတူတယ်၊ သြဂုတ်လ ၉ ရက်၊ စနေနေ့မှာတရားရုံးမှာ ၀ ယ်လိုက်တယ်၊ တယ်လီဖုန်းနဲ့သူတို့လုပ်နေတာတွေကို hallucinating လုပ်နေတယ်၊ ​​နောက်ဆုံး update နဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ်ကနေဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကိုသြဂုတ်လ ၉ ရက်၊ စနေနေ့မှာငါပြောင်းလိုက်တယ်။ တယ်လီဖုန်းကိုနှေးစေခြင်း၊ သင်အဆက်အသွယ်ကိုနှိပ်လိုက်လျှင်စက်ဝိုင်းအနည်းငယ်ပေါ်လာပြီးစတင်လုပ်ဆောင်သည်။ သင်မိနစ်ပိုင်းကိုခေါ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သင်သိမ်းဆည်းသောအခါ၊ ခဏကြာလျှင်သင်တွေ့ရှိပါကဖုန်းပေါ်လာလျှင်အရှက်တကွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ LG ၏ !!!!! ငါအသစ်တခုနှင့်အတူစမ်းသပ်ခဲ့ငါ့ကိုသူတို့ပြောင်းလဲသွားတယ်။ အိမ်မှာအဆက်အသွယ်တွေကိုငါတပ်ဆင်ပြီးဖုန်းခေါ်တယ်၊ ချိတ်ဆွဲတယ်၊ ကြိုးစားကြည့်တယ်၊ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ ငါပထမ ဦး ဆုံး update ကို install နှင့် lag သို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့မပါဘဲပြီးပြည့်စုံသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဆက်လုပ်ပေမယ့်ငါဒုတိယနှင့်နောက်ဆုံးတတပ်ဆင်သောအခါ, ငါစိတ်ပျက်မိကြောင်း, ကယခင်အရာလုပ်ဖို့စတင်ခဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအခါဖမ်းမိရရှိငါထည့်သွင်း တရားရုံးရဲ့အသိပညာနဲ့သူတို့ကသူတို့ကအခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအတွက်ပြောင်းလိုက်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုပိုက်ဆံပြန်ပေးကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ တစ်ဖက်မှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမလုပ်ဘူး၊ နောက်တစ်ခုကငါကိုချစ်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ hardware ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာလို့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတွက်သူတို့နောက်ထပ် update တစ်ခုပို့ပေးလိမ့်မယ်လို့မသေချာဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကပရိုဆက်ဆာတိုနေသေးတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက် "screen screen" လေးကို Quad HD နဲ့ထားလိုက်ပါ။ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။
Carlos Mesarina ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့် g3 ဆဲလ်ဖုန်းကအရမ်းပူလာပြီး ၃ နာရီအတွင်းမှာဘက်ထရီကုန်သွားတယ်။ ငါမင်းရဲ့နည်းလမ်းကိုကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်၊ Carlos de Lima Peru ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Carlos Mesarina အားပြန်ပြောပါ
Francisco ကတဖန်ငါလူးဝစ်ကိုပြန်လှည့်စားလိုက်တယ်။ ငါကလွယ်လွယ်ကူကူပထမဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ Terminal မှာတူညီတဲ့အပူချိန်ကိုအရင်သတိထားမိပြီးလုပ်တဲ့အခါငါအရမ်းနှေးနေတယ်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရန်စာအုပ်နှစ်ခုလုံးမှခေါ်ဆိုမှုများပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။ ခေါ်ဆိုမှုသည်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်၊ စက်ဝိုင်းအနည်းငယ်ကိုချန်ထားလိုက်ပြီးကြာမြင့်စွာခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်သည်။ ဘက်ထရီအားကုန်သွားသည်။ ငါပြောနေတာနှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်သာအသုံးပြုသည်။ ဒါကဘက်ထရီသက်တမ်းကိုအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့
ငါ PK ကိုအပူချိန်အလွန်မြင့်မားအောင်ပိတ်ထားရမယ်၊ ၅ မိနစ်အတွင်းမှာ Maps ကိုအသုံးပြုပြီးထိပ်ဆုံးမှာငါ့လက်ချောင်းများကိုမျက်နှာပြင်ကိုမီးရှို့လိုက်တယ်။
LG ကငါ့ကိုဒီမိုဘိုင်းဖုန်းကိုယူပြီးနောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုကိုပေးဖို့ကြိုးစားမယ်။ တနင်္လာနေ့မှာပြောမယ်၊
ကောင်းပြီ၊ ငါအရင်စာနှစ်စောင်မှာပြောခဲ့သလိုပဲငါစမ်းသပ်ခဲ့တယ်၊ ဒါကအပူမပေးတော့ဘူး။ ဒါကကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာအလုပ်လုပ်တယ်။ ပြီးတော့နှစ်ခုနဲ့တစ်ခုတည်းသော updates နှစ်ခုထက်ဘက္ထရီကလဲကျသွားတယ် ONE BIG SHIT ခဲ့ကြပြီ။ ယမန်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်နောက်ထပ်တတိယအကြိမ်ထပ်မံရောက်လာသည်။ တတိယအကြိမ်ထပ်မံရောက်လာပြီး၎င်းသည်တိုးတက်လာသည်ဟုထင်ရသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် CPU နှင့်ဖန်သားပြင်တောက်ပမှုကိုစက်ရုံစံသတ်မှတ်ချက်များသို့ပြန်ပို့ခဲ့သည်။
Terminal တွင်ပူပြင်းလွန်းသောသင်၏သူများအတွက်၊ ၎င်းသည်ဂိမ်းများနှင့်ဒေါင်းလုပ်အမျိုးမျိုးအတွက်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်အအေးခန်း terminal တစ်ခုဘယ်တော့မျှရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
EAB: V ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်းမဟုတ်ပါ၊ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်စကားပြောရန်နှင့်ပစ္စည်းပစ္စယအတွက်အသုံးပြုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်မသုံးသော်လည်းပူလာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဝိုင်ဖိုင်နှင့်ကွန်ယက်များကိုရပ်ဆိုင်းသော်လည်းအလွန်ပူပြင်းပြီးနှေးကွေးနေဆဲဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုမည်ကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။
EAB သို့ပြန်ကြားချက်: V
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် LG G3 "Spanish / international" ဗားရှင်းကိုတစ်လခွဲလောက်ရထားပါပြီ။
သင်မွမ်းမံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပြောသည့်အရာနှင့်ငါ့ကိုကြောက်နေသည်။ ဒီနေ့ (သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်) ကျွန်ုပ်သည်ဒုတိယအကြိမ်ဆော့ဖ်ဝဲအသစ်ပြောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းနှင့်၎င်းမတိုင်မီယခင် update တွင်ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemsနာမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်သည် Modern Combat5ကိုကစားသည်။ ယခုအချိန်တွင်အလိုအပ်ဆုံးဂိမ်းဖြစ်သည် (အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်၊ ပေါက်ကွဲမှုများနှင့်တုန်ခါမှု၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဝိုင်ဖိုင် ... )၊ ၎င်းသည်မကျသော်လည်းအပူလွန်ကဲခြင်းလည်းမရှိ (သူမကစားသောအခါကျွန်ုပ်၏အစ်မ၏ S5 လောင်ကျွမ်း) ။
ငါဘယ်တော့မှနောက်ကျကြဘူး, အီးမေးလ် / ရာသီဥတုထပ်တူပြုခြင်းတန်ဖိုးများကိုကောင်းစွာချိန်ညှိခြင်း, တည်နေရာတန်ဖိုးများနှင့်အတူတူပင်လုပ်နေတာ, ဘက်ထရီငါ့ကိုနှစ်ရက်တိတ်တဆိတ်ကြာရှည်ခံခြင်းနှင့်အလွန်နည်းပါးအသုံးပြုမှုကိုအောင် (နွေရာသီ၏အမှုအရာ) ၄ ရက်နှင့် ၂၃ နာရီကြာသည်။
တကယ်တော့၊ ဒီ terminal နဲ့ငါတွေ့ရတဲ့တစ်ခုတည်းသော "အားနည်းချက်" standard alarm နာရီကိုရေဒီယိုအက်ပ်ကိုဖွင့်ပြီးသင့်ကိုနှိုးဖို့ရွေးစရာမရှိပါဘူး။
ငါ့မှာပြproblemsနာတွေဘာကြောင့်ရှိတာလဲ (ဒါမှမဟုတ်မရှိသေးဘူး) ဘာကြောင့်လဲ။ လိမ္မော်ရောင်ကိုကျွန်တော်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လိမ္မော်ရောင်ကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်တာမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိပြီးသား ၁၀၀% ဟာအခမဲ့ဖြစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ
အကယ်၍ သင်သည်၎င်းကိုပစ္စတိုအဖြစ်အသုံးပြုပြီးရိုက်ချက်တစ်ခုကိုလွဲချော်လျှင်၎င်းသည်သင့်ကိုသတ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းကို၎င်း၏အလားအလာနှင့်ပုံပန်းသဏ္forာန်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကနောက်ဆုံးသတင်းများကိုအဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်စောင့်ဆိုင်းပါ။
Oscar နဲ့သဘောတူခဲ့ကြပေမယ့်အခုအချိန်မှာငါ့ကိုအများဆုံးသတိပြုတဲ့အရာကကမ္ဘာအနှံ့မှာသတင်းတွေပါ။ ပြီးတော့ CHASSIS ဟာအက်ကွဲခြင်း၊ ကွဲခြင်းခံရခြင်း၊ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များဟာမိုက်ခရိုပေါက်ကွဲမှုရဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်နေပြီ။ ငါကဒီ Terminal ကိုငါချစ်တယ်ငါကဒီ့အတွက်ပြတ်ပြတ်သားသားတည်ဆောက်မှုမှာပြတ်တောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိရင်တောင်မှဒီအပြီးသတ်ကိုငါမနှစ်သက်ဘူး၊ ပန်နက်လာလာအတွက်ငါဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးလို့ငါပြောတယ်။ ငါအိုင်တီပြန်သွားဤမျှလောက်များစွာသောအပျက်သဘောသဘာဝနှင့်အတူခါးသော။ စက်တင်ဘာစက်တင်ဘာအသစ်အတွက် BRANDS မှအသစ်တီထွင်မှုများ ... နှုတ်ခွန်းဆက်သ
ကျွန်ုပ်ဘဝကိုရှုပ်ထွေးစေသည့်အရာ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုပြန်လာသောကြောင့်တရားရုံးတွင်၎င်းကို ၀ ယ်ယူသောကြောင့်၎င်းသည်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်အတွင်း၌ရှိနေသည်။ ယခုတွင်များစွာသောခြိမ်းခြောက်မှုများရှိနေပြီး၊ လူအများကတိုင်ကြားချက်များအရလူနေအိမ်သို့မဟုတ်အဆိုးမြင်ဝါဒီသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ မိုက်မဲသောနှုတ်ခွန်းဆက်၏
မင်္ဂလာပါ။ လွန်ခဲ့သော ၃ ရက်က Vodafone ထံမှ Lg G3 terminal 3Gb gold color အသစ်ကို ၀ ယ်ခဲ့ပြီးတယ်လီဖုန်းရှေ့ဆက် ၃၄ ဖြင့်ခေါ်ဆိုသည့်အခါဖုန်းဆက်သောအခါပြproblemsနာများရှိနေပါသည်။ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုခွင့်မပြုပါ။ ခေါ်ပေမယ့်ရှေ့ဆက်ကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲဒါကငါ့ကိုစွန့်ခွာစေပြီးဒုတိယပြproblemနာကဖုန်းထိပ်ထိပ်မှာရှိတဲ့ဝိုင်ဖိုင်ကိုပိတ်ချင်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲဖွင့်လို့မရဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ချက်ပေးပါသို့မဟုတ်အဖြေတစ်ခုပြောပြပါ။
Eduard ငါပြန်ပြောဖို့သင့်ကိုအကြံပေးတယ်၊ ငါမှတ်ချက်တွေထဲမှာငါလိုင်ဆင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါလုပ်ခဲ့တာပဲ၊ ငါတို့က“ မုန့်စိမ်း” ကိုပေးတဲ့အခါမှာအမှတ်တံဆိပ်ကြီးတွေကငါတို့ကိုခေါင်းမူးစေပြီးငါတို့ကိုဒုက္ခရောက်စေတယ်။ ချို့ယွင်းချက်ရှိသောဆိပ်ကမ်းများကိုဖယ်ရှားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်အမျက်ဒေါသကုန်ကျစရိတ်ကိုတတ်နိုင်လျှင်ညှိယူပါက၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဘဝအတွက်ချွတ်ယွင်းသော terminal ကိုစတင်သည်။ ငါအိမ်မှာရှိခဲ့သည့်ဟောင်းနွမ်းသောလမ်းနှင့်လမ်းလျှောက်သည်။ ယခုစက်တင်ဘာလတွင်ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်အသစ်များထွက်ပေါ်လာမည့်အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ နှုတ်ဆက်ခြင်း။
ကြည့်ကြစို့၊ မူအရကျွန်ုပ်သည် Vodafone မှဖြစ်ပြီး၎င်းကိုပြန်ပို့ရန်စဉ်းစားနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ စက်တင်ဘာလအထိလူးဝစ်မသိသေးပါ၊ ကျွန်ုပ်ပြန်လာပြီးဖြစ်ပါပြီ၊ ၎င်းတို့သည်ချွတ်ယွင်းချက်ကိုအတည်ပြုရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအသစ်တစ်ခုအတွက်ပြောင်းလဲရန် LG က LG မှတောင်းဆိုထားသည်။ G3 (သို့) သူတို့ကပျက်ကွက်မှုကိုအတည်ပြုတဲ့အခါသူတို့ယူလာပေးမယ့်ဒီအသစ်ကိုငါဘယ်လိုရမလဲကြည့်ဖို့စောင့်ပါ။
ပြီးတော့ငါမေ့တော့မယ်၊ ငါပြန်လာဖို့နောက်ဆုံးကောက်ပဲသီးနှံဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကမိုဘိုင်းအပူလွန်ကဲခြင်းကြောင့်ဂိမ်းများ၊ ဒေါင်းလုတ်များများမသုံးခြင်းသို့မဟုတ်ဒီလောက်များများစားစားသုံးခြင်းမရှိဘဲငါ့ကို ၃၉ ၄၀ ဒီဂရီအထိအပူပေးနိုင်လိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း
ဂျိုး valdez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကကျွန်ုပ် g3 ကိုဝယ်ယူခဲ့သော်လည်းတစ်ညတာမှတုန်ခါမှုကိုရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုစက်ရုံသို့ပြန်ပို့လိုက်သည်။ ဘာမှမရှိ၊ အားလုံးရှိခဲ့သည့်အရာများနှင့်ရှိသည့်အပြင်သို့သွားခဲ့သည်။ မည်သူမဆိုအတူတူရှိခဲ့ပါသလား
Joe Valdez အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ သူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ်လည်းထပ်တူပင်ဖြစ်သည်။ ဒါကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး၊ ငါစက်ရုံကိုပြန်ပြင်ပြီးပြီ။ မင်းကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ 855gb db32 international model ရှိတယ်။ ကျွန်တော်အမြစ်တွယ်ပြီး 4.2.2 android rom ကို install လုပ်တယ်။ မြန်တယ်၊ အမြန်အလုပ်လုပ်တယ်၊ ပြnoနာမရှိဘူး၊ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ သူတို့ပြောတာကအက်ကြောင်းမရှိဘူး၊ သင်၏ပြနာကိုဖြေရှင်း
Mmmmm၊ ဒါငါလား၊ ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဖုန်းကိုရှုတ်ချတဲ့ Troll တွေအများကြီးရှိသလား။ အထူးသဖြင့်၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်အကြံပြုခြင်းအားသီးသန့်ထားရှိပုံရသည့်တစ်ခုရှိသည်။ ငါမှာ G3 ရှိတယ်၊ ပြီးတော့ထွက်လာကတည်းကကြီးလာတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အနည်းငယ်ပူတယ်၊ ဒါပေမယ့်တခြားသူတွေထက်မပိုဘူး ပြီးတော့ထည်ကိုဖြိုခွဲလိုက်တာနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကောင်းသောစက်ဝိုင်းဖြင့်ရှိသည်။
ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည် LG G3 နှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောထင်မြင်ချက်များကိုရှာဖွေနေသည်။ သို့သော်စာမျက်နှာမှားသွားပြီး ... ယှဉ်ပြိုင်မှု၊ xDDDD ကကမကထပြုထားသော "G3 каршыအိတ်" အဖြစ်သို့ငါရောက်သွားသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်တွင်သင်ဖြစ်ပျက်သောအရာသည်၎င်းကို Iker Jiménezအစီအစဉ်သို့ယူဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းသည် X-Files (သို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုသာဖြစ်သည်) ဟုခွဲခြားနိုင်သည်။ စွဲမှတ်ဖွယ် !!! အရမ်းရယ်ရတယ်။
လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် - G3 ၏ကံကောင်းထောက်မစွာအသုံးပြုသူ၊ နောက်ကျသောအပူမရှိခြင်း၊ အဆက်အသွယ်ပြတ်သောအခါစက်ဝိုင်းငယ်များ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှောင့်နှေးမှုမရှိခြင်း၊ Quad HD“ မျက်နှာပြင်ငယ်” နှင့်ပြproblemsနာများမရှိ၊ မျက်နှာပြင်ကိုထိသောအခါလက်ချောင်းများတွင်လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိခြင်း micro ... blablabla (ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှသတင်းများ၊ ကျွန်ုပ်ထွက်ခွာခြင်းဖြစ်သည်။ ဟဟား) မှ ၆ နာရီကြာသော (ဘက္ထရီတစ်ခုမဟုတ်၊ ဘက်ထရီနှစ်လုံးမပါ ၀ င်သော) ဘက်ထရီ (များ) မပါ ၀ င်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောနှင့်ထိုကဲ့သို့သော။
PS: Alexx ဟုတ်တယ်၊ troll တွေအများကြီးရှိတယ်။
LG ကဘာကြောင့်ဒီလောက်လူသိများရတာလဲမသိဘူး။ ငါတောင်းတာပဲသုံးရက်အတွင်းရောက်လာတယ်၊ ၉၃% က G3 အတွက်အပျက်သဘောဆောင်သောမှတ်ချက်များဖြစ်လို့အမှားရှာတွေ့မှာကိုငါကြောက်နေပြီ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် ၀ ယ်လိုက်ပြီးနောက်ကျကျန်ခဲ့ပါကနေရာတိုင်းတွင် galaxy s3 lag ကို ၀ ယ်သောအခါအိတ်ကပ်ထဲ၌အဖုံးများပါရှိသည်။ အော်ပရေတာက ၀ ယ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်မွမ်းမံနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။ နောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ထည့်သွင်းထားကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောပြသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲလိုသည်၊ မည်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာကို ၀ ယ်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်များကိုကြားရသည်
ပနားမားမှနှုတ်ခွန်းဆက်သသည်။ ဒီနေရာမှာတစ်ယောက်ယောက် g3 ကရုတ်တရက်တုန်ခါမှုကရပ်တန့်သွားပြီးဆဲလ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကိုရွေ့လျားလာတာနဲ့အမျှ g4 ပြtheနာတက်လာတယ်။ ဒါကြောင့်တုန်ခါနေတယ်။ ငါစက်ရုံကိုအခု ၄ ကြိမ်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီ။
Joe Black သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ခင်ဗျားဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်က shit ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသိချင်တယ်။ ငါ့မှာ v10e ရှိတယ်။ v10h ဆီကိုမွမ်းမံသင့်မသင့်အကြောင်းမသိဘူး။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်တိုင်ကြားချက်များစွာကိုဤသည်မှာအလွန်ကြီးစွာသော terminal တစ်ခုဟုမြင်ရသည်။ အမှန်တကယ် ... ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အလုပ်လုပ်သည်။ ငါဘက်ထရီကိုကြောက်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုကိုင်ထားလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုငါဆိုသောဖိုရမ်များစွာတွင်ဖတ်သောကြောင့် 2k မျက်နှာပြင်သည်၎င်း၏အကျိုးဆက်များရှိသည် .. ဒါပေမယ့်တကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ နှင့်ဘက်ထရီသည်ကျွန်ုပ်၏ယခင် S2 ထက် ၂ ရက်ပိုကြာသည်။ ငါ့ကိုစိတ်ပျက်စေသည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာ Antutu Benchmarket သည် ၂၆,၀၀၀ ကို Galaxy S5 ကိုကျိုးနွံစွာမထုတ်လုပ်နိုင်မှီအထိလွှတ်တင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မှားသည်ဟုထင်ခဲ့သည် ၇ ကြိမ်ထပ်ပြီး ၂၇ ထက်မပိုဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် terminal ကကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကတော့ LG ဟာဆော့ဖ်ဝဲလ်နဲ့ပြproblemsနာတချို့ကိုဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်။
လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကကျွန်ုပ် lg g2 ကို ၀ ယ်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်နေ့ပြန်ပို့လိုက်လျှင်ဘက်ထရီသည် ၆ နာရီကြာအသုံးမ ၀ င်ပဲအပြည့်အဝအားသွင်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်ကိုအခြားယူဆောင်လာသည်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီကနေ့ဒီနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုယူပြီးဒီပြwithနာကိုဖြေရှင်းမယ်။ ကြာသပတေးနေ့မတိုင်ခင်သူတို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်၊ ငါ terminal ကိုပြန်လာပြီးနောက်တစ်ခုဝယ်လိုက်မယ်။
ငါ့မှာ LG G3 ရှိတယ်။ ငါမှာပြproblemsနာမရှိဘူး၊ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ Samsung Galaxy S3 အစား LG G5 ကိုရွေးလိုက်တာကျေနပ်မိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါက Samsung S4 ကလာတာကငါ့ကိုပြproblemsနာဖြစ်စေတယ်၊ ​​ဘက်ထရီကမကောင်းဘူး။ ကောင်းပြီ၊ စနစ်စနစ်နှေးသွားတယ်၊ သူ့ကင်မရာကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့နှေးနေတယ်၊ ​​ငါ S5 ကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်သူကတိုးတက်လာတယ်လို့သူတို့ပြောကြတယ်။ အခုငါရှိနေတဲ့ LG G3 နဲ့ဘက်ထရီကကြာရှည်ခံတယ်။ ၂ ရက်အတွင်းပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်သူ၏ကင်မရာသည်နေ့နှင့်ညအချိန်များတွင်ဓါတ်ပုံများကိုအလျင်အမြန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရိုက်ယူနိုင်ပြီးဓာတ်ပုံကိုဘယ်တော့မှရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ LG ၏အကွာအဝေးကိုတိုင်းတာသည့် autofocus laser ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် ရိုက်ကူးရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရအောင်လုပ်ထားတယ်၊ ၅.၅ လက်မ Quad HD မျက်နှာပြင်ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဆဲလ်ဖုန်းအရွယ်အစားကိုများများမတိုးဘဲနဲ့ငါလက်ထဲမှာကိုင်ပြီးကိုင်ထားနိုင်တယ်၊ တိုတိုပြောရရင် LG G2 ကအရမ်းကောင်းတဲ့ဆဲလ်ဖုန်းတစ်ခုရွေးလိုက်တာဝမ်းသာပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဆဲလ်ဖုန်းကိုပြောင်း။ နောက်ဆုံးကုမ္ပဏီသို့မွမ်းမံနိုင်ခဲ့သည်။ ပြောင်းလဲမှုမှာသိသာထင်ရှားသည်။ နောက်ကျသွားပြီ၊ ဘက်ထရီသက်တမ်းကုန်သွားသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များပျောက်ဆုံးနေသည်။ ယခုဆဲလ်ဖုန်းနှင့်ကျွန်ုပ်အလွန် ၀ မ်းသာမိသည်။ full hd မှအပြောင်းအလဲသည် 2k တွင်သိသာထင်ရှားသည်
ဆဲလ်ဖုန်းသည်ဘက်ထရီကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲသောကြောင့်မိနစ် ၃၀ အတွင်းသကြားလုံးမှိုပြိုခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ဘက်ထရီ၏ ၄၅% ကိုစားသုံးသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ကစားရန်အနား။ ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုသူ့ကို movistar ခေါ်သွားပြီးသူတို့ကငါ့ကိုဘာမှအဖြေမပေးဘူး။
ပတ္တမြား carranza ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လိုငါဒီ site ပေါ်တွင်ဖတ်သောရက်စက်ယုတ်မာမှုများ၏အရေအတွက်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။ အိုဘုရားရေ ။ ဟားဟား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမကောင်းတဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပါတဲ့ဖုန်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် s5 exynios ကိုသွားပါ။ ငါကဒီကနေလာပါတယ် အရမ်းပူလာပြီးအရိုးရှင်းဆုံးဂိမ်းထဲကငါ့ကိုထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ 10 မိနစ်တိုင်းလျှောက်လွှာအမှား။ သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နဲ့မပတ်သက်ဘူး ၄ င်းသည် 4k screen ပါသောအလှတရားတစ်ခုဟုထင်ရပြီး၎င်းသည် s5 ထက်များစွာကောင်းမွန်သည်။ သူ့ရဲ့ auntuntu ရမှတ်ကမပံ့ပိုးပေမဲ့ Lollipop နှင့်အတူပြောင်းလဲသွားသောအရာသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၄၀၀၀၀ ခန့်အထိတိုးလာသည်။ ကျောက်ခဲခေတ်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်သင်ဖြေရှင်းရန်သင်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ruben carranza အားပြန်ကြားပါ
flash tool 2014 မှတရားဝင် Lollipop ဗားရှင်း 20A သို့အဆင့်မြှင့်ပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောသုညစွန်းထင်းမှုနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီးမည်သည့်အရာမျှအပူမပေးပါ။ ၎င်းကိုသာကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
နောက်ဆုံးမွမ်းမံမှုအပြီးတွင်ရံဖန်ရံခါ Beep ဖြင့်မျက်တောင်ခတ်သည်။ နောက်ခံပုံသည်မူရင်းပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒါကိုတည်းဖြတ်ဖို့ငါကပိတ်ထားခြင်းနှင့်နောက်ကျောကိုငါ့ရွေးချယ်ထားသောနောက်ခံပုံထားရန်ရှိသည်။ ဒီတစ်စုံတစ် ဦး ကဖြစ်ပျက်သို့မဟုတ်သင်ပြproblemနာအကြောင်းကိုသိသလား
LG G3 d855 မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့နောက်ကျတာကို lollipop update ကတောင်မှမပြုပြင်နိုင်ပါ။ ငါ s4 ကနေ LG ကိုသွားတယ်၊ ဒါကကြီးလေးတဲ့အမှားပဲ။ ဤဝိသေသလက္ခဏာများသည်၎င်းဖြစ်ပျက်ပြီး၎င်းတို့ကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါကနာကျင်မှုရှိသည်။ လျှောက်လွှာများဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းနှောင့်နှေးခြင်းသို့မဟုတ်ပင်မမျက်နှာပြင်သို့သွားခြင်းသည်စက္ကန့်၏ဆယ်ပုံတစ်ပုံလျှင်ပင်မုန်းတီးသည်။ ပြီးတော့အဲဒါဟာအပူပေးရမယ့်ကိစ္စလား၊ ဒါမှမဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ် terminal တခုလို့မပြောပါနဲ့။ မိုဘိုင်းဖုန်းကိုပြောင်းလဲပြီးကတည်းကမိုဘိုင်းဖုန်းသည်ဒုတိယမြောက်မိုဘိုင်းဖုန်းဖြစ်သည်။ ငါအတည်ပြုထားသောဖိုရမ်များနှင့်ဘာမျှမထွက်လာသောအဆင့်မြင့် options များအပြောင်းအလဲများလုပ်, စက်ရုံအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်စတင်, launcher.etc ပြောင်းလဲ။ မည်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲနိုင်မည်ကိုသေချာစွာပြောနိုင်ပြီးမည်သူ့ကိုမျှဤမိုဘိုင်းဖုန်းကိုကျွန်ုပ်မထောက်ခံပါ။ လူအများစုက lollipop များရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ၎င်းသည်ပြတ်တောက်လိမ့်မည်ဟုထင်မြင်ခဲ့ကြသည်။
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါနေ့ရက်များ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကသူတို့ကငါ့ကို lg g3 ကိုပေးခဲ့သည်။ အမှန်တရားကတော့ငါဆော့ဖ်ဝဲကိုမွမ်းမံရန်၎င်းကိုငါမပေးမှီတိုင်အောင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာနှင့်ဗားရှင်းအသစ်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝမကြိုက်ပါ။ အရင် version ကိုရအောင်ဒီ version အသစ်ကိုငါဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမလဲပြောပြနိုင်မလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီဇိုင်းအပြောင်းအလဲများသာမကအနာဂတ်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်တိုးတက်မှုများရှိသောကြောင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်များကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်ဟုထင်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမရပ်တန်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်မှာ၎င်းကိုတစ်လမျှပိုင်ဆိုင်ထားပြီး၎င်းကိုနောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး၊ ဖုန်းကြီးနှစ်ခုလုံးတွင်ပြproblemsနာမရှိခဲ့ပါ။ စက်ဝိုင်းအမှုနှင့်အတူရှိလျှင် ပို၍ ကောင်းသည်၊ သူတို့ဘယ်မှာရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ပြproblemsနာအများကြီးရနိုင်လားသင်တစ်ချိန်တည်းမှာ install လုပ်ထားတဲ့ပရိုဂရမ်တွေအများကြီးရှိတယ် ((ဘယ်ဆိုင်တွေ၊ pirati တွေမသိဘူး) ... မင်းမှာဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခု (သို့) အဲ့ဒီအပူကိုဖြစ်စေတဲ့ resident program တစ်ခုရှိလား? ငါ ကျွန်တော့်အတွက်အရမ်းပျော်တယ်၊ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်၊ ငါခဏအနားယူစရာမလိုဘူးထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမြင်တဲ့အတိုင်းငါသံသယဝင်တယ်။
ထို့အပြင် ၀ န်ထမ်းများကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ထားသောဤဖိုရမ်တွင် "ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်း" များစွာရှိသည်ဟုထင်ရသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် "S" နှင့်ကိုက်သည့်ပန်းသီး၏ပရိသတ်များ G3 သည်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နေသည်ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးကြောင်းတွေ့ရှိရသည် ။
ငါအရမ်းကြိုက်တယ်၊ ဘက်ထရီကသာပျက်သွားပေမဲ့ကြာရှည်မခံဘူး၊ မျှော်လင့်ဘက်ထရီကို fix
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်မှာ g3 ရှိတယ်၊ အသစ်ဝယ်လိုက်ပြီ၊ ဖြန့်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်အပူရှိန်အလွန်အမင်းပြproblemနာကရုတ်တရက်ပဲ၊ အရာအားလုံးအားလုံးနဲ့ကောင်းတဲ့ terminal တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမယ့်အကြီးအကျယ်ကျဆင်းနေတာကအပူလွန်ကဲတာပဲ။ ၎င်းကို 5.0 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သော်လည်း ... ခေတ်မီစမတ်ဖုန်းများတွင်ကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သော်အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်မှားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ Motorola G ဒုတိယမျိုးဆက်တွင်၎င်းသည်တစ်ခါမျှမဖြစ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုဝယ်ယူရန်ရောင်းသော်လည်းမှားခဲ့သည် LG ကဒီကြီးမားတဲ့ပြproblemနာအတွက်အဖြေအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
Lollipop V20h ၏အဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့်အတူအချိန်တိုအတွင်းအများအားဖြင့်ပြင်ဆင်ချက်ကိုပြုပြင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်နောက်ကျောခလုတ်များပေါ်တွင်အပူလွန်ကဲသော်လည်း။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပါ
အမှား…ကျွန်ုပ်မှာ V20h ရှိတယ်၊ နေရာတိုင်းမှာအတူတူပဲ…လာဂါဇို…နောက်မိုဘိုင်း… Iphone6… Android Fuck
အာ နောက်တစ်ခု ... ငါ 5.0 ကို update လုပ်ပြီးကတည်းက ၉၉% အားသွင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖုန်းကပျက်သွားပြီးဖြုတ်ပြီးသည်အထိစဉ်ဆက်မပြတ်အသံမြည်လာသည်။ နေ့တိုင်းလိုလိုမှာ "start токтоလိုက်သည်" ဆိုတဲ့သတင်းကိုဘယ် application မှမဆိုရတယ်။ လာစမ်းပါ ... ငါ jllita ကိုကျွန်တော်ငရဲသို့အမြန်ဆုံးပို့မည်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော့်သည် movistar ကိုလံဘီယာမှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဒီဇင်ဘာလတွင်၎င်းကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ယနေ့အထိကျွန်ုပ်အလိုရှိဆုံးကစားသမားအဖြစ်ကစားနိုင်ပြီးမိနစ် ၂၀ ခန့်ပြန်လည်စတင်သည်။ ဆက်လက်ကစားသည်။ ၅ မိနစ်အကြာတွင်ငါသတိပေးသည်နှင့်ပိတ်လိုက်သည်နှင့်ကစားပွဲမှထွက်ခွာခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဖတ်နေဒီမှာအဟောင်းတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါဘူး GPS၊ ဒေတာ၊ ဝိုင်ဖိုင်၊ အလိုအလျောက်တောက်ပမှုနှင့်ဘလူးတုသ်သုံးခြင်းသုံးနာရီခွဲခန့်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဘက်ထရီကိုည ၈ နာရီခန့်တွင်နံနက် ၉ နာရီတွင်စတင်ရရှိသည်။ ငါဟာပျမ်းမျှအားဖြင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကုန်နေပြီလား၊ ကျနော်တို့ကပြန်လာလျှင်ကြည့်ရှုရန်။ လေးစားပါတယ်
vateria ၏ 15% ကိုမနှုတ်ဆက်မီ၎င်းကို load လုပ်ရန်ကြိုးစားပါ။
မင်္ဂလာပါ။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တွင် lg g3 အသစ်ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတွင်မည်သည့်အာမခံချက်မျှမရှိပါ။ ၎င်းသည်ဘာဖြစ်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ၎င်းသည်သူ့ဟာသူသော့ခတ်ခံရသည်၊ ၂ စက္ကန့်တိုင်းအချိန်နှင့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာဘက်ထရီကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်ကသော့ခတ်ထားသည့် back ခလုတ်ကိုပေးသည်။ ၂ စက္ကန့်ကြာပြီးနောက်သင်သော့ဖွင့ ်၍ မရပါက၎င်းကိုစက်ရုံမှလုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ကြိုးစားသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာလွန်ခဲ့သော ၄ လက D855 32GB ရှိတယ်။ Amazon မှာဝယ်လိုက်တယ်။ အမှန်တရားကတော့ပြproblemနာမရှိဘူး၊ အပူမရှိဘူး၊ restart မလုပ်ဘူး၊ kit kat နဲ့သိပ်နောက်ကျမနေဘူးလား၊ V4H ဗားရှင်း -TWN-XX
ငါမိုဘိုင်းနှင့်အတူ5လကျော်ခဲ့ !! !! သင်ပြောဘာမှငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့အပူ, နောက်ကျနေပြီလည်းမဟုတ်သလိုအောက်မှာသို့မဟုတ်ဘာမှမဘာမှမဖြစ်။ , ငါ့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော, မျက်နှာပြင်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဘယ်သူမျှမ သင်သည် 4K resolution jaajjaj ကိုကြည့်နိုင်သည်၊ smart6ကိုကြည့်။ iPhone3ထားပါ။ LG G1080 ကိုဘေးတွင်ထားနိုင်သည်။ မည်သည့် YouTube ဗွီဒီယိုကိုမဆို 3p ထက်ပိုပြီးကစားနိုင်သည်။ ကွာခြားချက်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ LG G3 ၏မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးသည်ရက်စက်စွာ !! !! သင်ပလပ်စတစ်လက်နှင့်တူသောအရာတစ်ခုခုရှိသော trolls များ၊ ထိုမှတပါးသင် lg g2 ကိုလိုချင်သည်ဆိုလျှင်၎င်းကိုဖုန်းခေါ်ရန်နှင့်ဓာတ်ပုံများသုံးရန်သင်ဖတ်ရှုရသလား။ s100 သို့မဟုတ်၎င်းကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်သိမ်းဆည်းရန်သင်သုံးသောအရာများအတွက်ဖမ်းပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤ terminal ကို ၀ ယ်ရန် ၁၀၀ × ၁၀၀ အကြံပြုသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားတွင် iPhone 100 ရှိပြီးအာလူးဖြင့်စားသည်။
ခင်ဗျားဘာပြောတာလဲ။ ဒါကကောင်းတဲ့ terminal တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကနောက်ဆုံးပေါ် android ဗားရှင်းတွေနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီ။ ၉၉% ရောက်တဲ့အချိန်မှာကုန်သွားရင် ၁၅% အောက်ရောက်ရင် ၉၉% ရောက်သွားတယ်။ ကွင်းဆက်နှင့်မျက်နှာပြင်သည် beep ကိုမဖွင့်ဘဲရပ်တန့်သွားပြီး 15x99 တိုင်းနံရံများကိုပြောင်းသည်။ အပျိုစင်လေးသွားကြစို့ ...
မက္ကဆီကိုမှကောင်းသောနေ့ကျွန်ုပ် Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် terminal ကိုကျွန်ုပ် ၀ ယ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ပြသနာများရှိပြီးဖန်သားပြင်သည်ငြီးငွေ့လာချိန်တွင် terminal သည်ပြstartedနာတစ်ခုစတင်လာသည်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ဖော်ပြရမည်ကိုမသိရသေးပါ။ ဒါကြောင့်ငါကမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်သော့ဖွင့်သည်နှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်ငါကထင်ပါတယ်။ ပူလာသောအခါငါအာမခံအောက်မှာယူကသူတို့အမှု၌အက်ကြောင်းအဖြစ်သူတို့ lg မငါ့အဘို့ကပြောင်းလဲပစ်လို့မရပါဘူးထွက်လာ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာဂရုစိုက်သောဖုန်းများကိုသာပြောင်းလဲခြင်းကိုလက်ခံသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ခက်ခဲသောပြန်လည်စတင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်း၎င်းကိုခဏအသုံးပြုပြီး၎င်းတွင်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်ရှိသော်တူညီသောအရာဖြစ်ပျက်ပြန်သည်။ ၎င်းသည်သင်နှင့်တူညီသည်ဟုတ်မဟုတ်သိလိုသည်။ ဒီ mods တွေကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအခြားဝယ်ဖို့ ipte အာမခံချက်အောက်မှာရှိပေမယ့် lg g3 stylus ကိုသုံးတာတောင်မှအသုံးမပြုဘဲတောင်မှအရမ်းဆိုးဝါးလွန်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ high-end လိုမျိုးအပူမပေးပါဘူး။
ဟယ်လို။ လွန်ခဲ့သော ၂ လခန့်က LG G3 ကိုဝယ်ခဲ့သည်။ ငါတကယ်မကြိုက်ဘူး အရမ်းနှေးတယ် WhatsApp ကိုဖွင့်လျှင်တောင်နှေးသည်။ WhatsApp ကိုဖွင့်ရန် နှိပ်၍ ဆဲလ်ဖုန်းကသင့်ကိုကြည့်ပြီးလျှောက်လွှာကိုဖွင့်လိုက်သည်။ ထို့အပြင်လျှောက်လွှာကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့်ချက်တင်စာရင်းရှိပရိုဖိုင်းဓါတ်ပုံများကိုမတင်ဆောင်နိုင်တော့ဘဲနှစ်စက္ကန့်ပိုင်းအကြာတွင်၎င်းတို့သာတင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မှတ်ဥာဏ်နည်းပါးသောကြောင့်တူညီနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်နှေးသည်ဟုသင်ထင်သောကြောင့်၊ များစွာသောဗွီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုဖျက်ပစ်ပါ။ ငါဒီဆဲလ်ဖုန်းမတိုင်မီ Note3 ရှိခဲ့ပါတယ်။ Note3 မှာကျွန်တော်ဟာ Real Racing3ကိုအခက်အခဲမရှိ၊ နောက်ကျခြင်းမရှိဘဲကစားခဲ့ပါတယ်။ LG G3 တွင်တူညီသောဂိမ်းသည်နှေးကွေးပြီးနောက်ကျကျန်နေသည်။
ပြီးတော့ကျွန်တော် application ထဲရောက်နေရင် home screen ကိုသွားဖို့ start key ကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ ထွက်ဖို့အချိန်ယူရတယ်၊ ပြီးတော့ home screen ထွက်လာတဲ့အခါစက်ဝိုင်းပုံသဏ္loadingာန်ပြနေတဲ့စက်ဝိုင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ အမှန်တရားကတော့အဲဒီပရိုဆက်ဆာနဲ့အတူဒီနှေးနှေးအလုပ်လုပ်တာကိုရှက်စရာပါ။ ဒီဟာကအာဂျင်တီးနားမှာ ၁၂၀၀၀ ပီဆိုဆဲလ်ဖုန်းနဲ့မတူဘူး။ ၎င်းသည်အနိမ့်ဆုံး ၃၀၀၀ peso ဆဲလ်ဖုန်းနှင့်တူပြီး၎င်းသည်နှေးသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့သည်းခံခြင်းကိုဆုံးရှုံးစေသည်။
emmanuel ချားဗေ့စ် ဟုသူကပြောသည်
ကျွမ်းကျင်သူ၊ ကျွန်ုပ်၏အကူအညီကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုပုံမှန်မီနူးမှပြန်ယူရန် ၁၅ ရက်နီးပါးကြာပြီဖြစ်သောကြောင့် android.system ပconflictိပက္ခဖြစ်နေသည်။
ငါပြန်ထားလိုက်ပြီ။ ဖုန်းကအဆင်ပြေတယ်။ အဲဒီမှာဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဗ်ဝဲတပ်ဆင်ထားရင်တောင်ကင်မရာကိုသက်ဝင်သောအခါပြန်လည်ဖွင့်ပြီးတခါတလေအပူလာပြီးပြန်လည်စတင်ပြီးပြန်လည်စတင်လာရင်ပြproblemနာဖြစ်စေတယ်။ ငါသည်သင်တို့၏ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာငါမြင်သောစမ်းသပ်မှုကဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်
emmanuel chavez သို့ပြန်သွားရန်
Ramiro Melean ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းမွန်သောနေ့လည်ခင်းတွင်ကျွန်ုပ်၌ LG G3 D855 ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် YouTube ဗီဒီယိုများနှင့်ပြည့်စုံသောမြင်နိုင်စွမ်းရှိသောဗွီဒီယိုတစ်ခုနှင့်အတူရောက်လာသည်။ သို့သော်တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားမဖတ်နိုင်သည့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုပို့လျှင်၎င်းသည်အသံဖြင့်သာကြားရသည်၊ ဤပြproblemနာကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Ramiro Melean အားပြန်ပြောပါ
ဟိုင်း၊ ကျွန်တော့်နာမည် Tatiana ။ ငါ lg g3 ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်က ၀ ယ်လိုက်ပြီ။ မင်းပြောတာကိုမင်းလုပ်ခဲ့ပေမဲ့တူနေတယ်၊ ​​အရမ်းမြန်လွန်းတယ်၊ ငါဘာမှမကစားနိုင်ဘူး၊ အွန်လိုင်းသွားလို့မရဘူး အရမ်းပူလွန်းပြီးသင်၏လုံခြုံရေးသည် terminal ကိုပိတ်လိမ့်မည်ဟုသတင်းစကားထွက်လာသည်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ?
ငါမှာ whatsapp ရှိထားပြီး lg g3 stylus ရှိတယ်ဒါပေမယ့်ကွန်ပြူတာကိုအကြိမ်ကြိမ် restart လုပ်ပြီးပြီ။ သူကချိတ်ဆက်ထားတာမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ whatsapp ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်တယ်။
martin စတုရန်း ဟုသူကပြောသည်
ငါ lg g3 စည်းချက်ရှိသည်။ sw ကိုမွမ်းမံနိုင်။ ငါသည်သင်တို့၏ device ကိုမှတ်ပုံတင်မထားဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သလဲ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေရှင်းနည်း
plaza martin ကိုပြန်လည်စာပြန်ပါ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည် 3gb l3 terminal ကိုသုံးလကြာအောင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး၎င်းကို titanium အရောင်ဖြင့် 9e ဖြင့် ၀ ယ်ခဲ့ပြီး ၅.၀ lollipop ပါ ၀ င်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အထက်ပါပြproblemsနာများမရှိခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖုန်းကိုအမြဲတမ်းအားသွင်းသည်။ နှစ်ရက်ကြာပြီးအချို့သောအလွန်ကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံများသည်ရိုက်ချက်တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စီးရီးကို ၁၄၄၀p တွင်အခါအားလျော်စွာကြည့်ရှုရန်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်။ တိုတိုတစ်ခု
ဒိုင်ယာနာ Fonseca ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုလံဘီယာမှဖြစ်ပြီး၊ ဒီ Terminal ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လက Movistar နဲ့ ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ ဒါကငါ့အတွက်အရမ်းကောင်းပါတယ်။ မကြာသေးမီရက်များအတွင်းမှသာကျွန်ုပ်သည်အရသာနှင့်အသုံးမပြုဘဲဘက်ထရီသည်အလွန်လျှင်မြန်စွာအားကုန်သွားသည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ ည ၁၁ နာရီမှာအိပ်ရာဝင်တယ်။ ငါက 1% မှာစွန့်ခွာခြင်းနှင့် 11 a.m. မှာထရ ငါ 100% ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းရှာတွေ့, ဒီနေ့ဥပမာအားဖြင့် ၆၁% တွင် wifi၊ ဒေတာကွန်ယက်နှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များကဲ့သို့လည်ပတ်မှုအားပိတ်ထားသည်။ ငါ့မှာဒီဖြစ်ပျက်မှုမဖြစ်စေရန်မည်သူမဆိုအကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်အကြံဥာဏ်များပေးပါသလား။ !! '' ငါ့ကိုဝမ်းနည်းစေသောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်ကတည်းက။ ကျန်တဲ့အရာတွေအတွက်သူ့ကို Quick Circle ၀ ယ်လိုက်တယ်။ ဒါကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစရာလည်းကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းဘက်ထရီသက်တမ်းပြaboutနာကိုငါစိုးရိမ်တယ်။ အူကအပူလွန်ကဲသော်လည်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်သောဆဲလ်ဖုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်၊ အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးအဆင့်မြင့်ဆဲလ်ဖုန်းဖြစ်သည် hahahaha ကျွန်ုပ်သည်ရာဘာကြမ်းတမ်းခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ ၀ ယ်ယူခြင်း၏အားသာချက်ကိုအပြည့်အဝခံစားချင်သည်။ !! သူငယ်ချင်းများ !!
Diana Fonseca အားပြန်ပြောပါ
cristobal sepulveda ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ချီလီမှဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကဤဆဲလ်ဖုန်းကိုကျွန်ုပ်ဝယ်ခဲ့သည်။ ပြtheနာကသင်ဆဲလ်ဖုန်းကိုပြန်ဖွင့်သောအခါ၊ ဂိမ်းအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်မှအဖြေတစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်မှတ်ဉာဏ်ကုန်သွားပြီ၊ စတိုးဆိုင်ကျော်ယူချင်ပါဘူးကတည်းက
cristobal sepulveda အားပြန်ပြောပါ
ဟယ်လို! ငါ့မှာ LG G3 Beat ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကအသံသွင်းထားတဲ့ WhatsApp မှာအသံသွင်းတယ်။ သူတို့ကအသံနိမ့်အသံကြားရတယ်။ အသံအတိုးအကျယ်မြင့်တယ်။ ငါဖုန်းခေါ်တဲ့အခါတိုင်းသူတို့နားမထောင်ကြဘူး ... ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းမှာဘာမှားနေတာလဲ။ ကျေးဇူးပြု။ ကူညီပါ!
မိုက်ကရိုဖုန်းမှသင်၏လက်ကိုဖယ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သလား၎င်းသည်အကာအကွယ်ပေးရန်စံဖြစ်သောစံသတ်မှတ်ထားသောအကာအကွယ်ရုပ်ရှင်ကိုသင်ဖယ်ရှားပြီးပြီလား။ ဒါပမေဲ့အံ့သွမှုအလုံအလောက်ရှိတခါတရံမှာဒီအသေးငယ်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရတာအဖြေကလွယ်ကူပါတယ် ငါနေတဲ့တိုင်ကြားစာတွေအများကြီးကိုမှတ်မိသေးတယ် Xiaomi Redmi Note အသုံးပြုသူများသည်ကျပန်း reboot များနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းသည် ၎င်းသည်ကာကွယ်နိုင်သောပလပ်စတစ်သေးသေးလေးတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြုတ်တပ်နိုင်သည့်ဘက်ထရီထဲ၌ ၀ င်ရောက်ပြီးကော်နတ်ရှင်များကိုသာဖုံးအုပ်။ မမြင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါက Xiaomi Redmi Note ပြrebနာကိုဖြစ်စေတယ်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်သင့်အား ဆက်၍ ပျက်ကွက်နေပါက LG SAT၊ နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကိုသွားလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကဤ terminal ကိုကျွန်ုပ် ၀ ယ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တွင်ကင်မရာနှင့်ပြသနာများရှိသည်။ ဓာတ်ပုံများသည်မှုန်ဝါးနေပါသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့သိထားသောဝိသေသလက္ခဏာများပါသည့်ကင်မရာနှင့်မတူပါ။ မည်သည့်အကြံဥာဏ်မှမပါ။
Francisco ကမင်္ဂလာပါကောင်းသောည ငါ့မှာ LG G3 မော်ဒယ် D855P ရှိတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်ကအလိုအလျှောက်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အဆင့်မြှင့်တင်မှုအကြောင်းကြားစာရောက်လာပြီးငါ Android2Lollipop ဗားရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်လိုက်တယ်။ ဒီမွမ်းမံခြင်းမပြုမီ၊ ဖုန်းတွင်မျက်နှာပြင်ပြproblemနာတစ်ခုသာရှိခဲ့ပြီးအာမခံဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ version 5.0 သို့ update လုပ်ပြီးသည်နှင့်ပြproblemsနာများစတင်ခဲ့သည်။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် default music player (play music ၌) ရပ်တန့်သွားသည်၊ ၎င်းသည်ယခုထိရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်းအချိန်နှင့်ကွဲပြားပြီးရံဖန်ရံခါပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိသည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယခုအလွန်နှေးကွေးကြောင်းကိုလည်းသတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လျှောက်လွှာတစ်ခုရှိနေပြီးတုန့်ပြန်မှုပြုလုပ်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာယူရလျှင်ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိသော်လည်း နောက်ဆုံး၌၎င်းသည်ယခင်ထက်အနည်းငယ်ပိုအပူပေးသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုစနစ်တကျပြန်လည်အလုပ်လုပ်ရန်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။
Android 4.2 ဖြင့်ပုံသဏ္ာန်ကျအောင်ပြုလုပ်ပြီး၎င်းကိုစက်ရုံတွင်ထားပါ။ မီနူး၊ ဆက်တင်များ၊ ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်း၊ သင်၏အဆက်အသွယ်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ တေးသီချင်းများကိုအရံသိမ်းလိုပါက LG Backup ကိုရွေးချယ်ပြီးသင်လိုချင်သည့်အရာကိုစစ်ဆေးပါ။ အရန်ကူးခြင်းနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်း။ အကယ်၍ သင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်၊ သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားမှာကိုပြnoနာမရှိဘူး။ အဲဒီမှာမှစက်ရုံအချက်အလက်များပြန်ယူရန်သင်ရွေးချယ်ပါက၊ MicroSD ဒါမှမဟုတ် external memory၊ ဖုန်းနဲ့ voila ကို restore လုပ်တဲ့နေရာကိုသာတို့ထိလိုက်ပါ။ စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဟာနည်းနည်းလေးနောက်ကျပြီးငါ့ကိုလုံ့လရှိရှိဘက်ထရီအလုံအလောက်ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်အလင်းနဲ့ပိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရလို့ပါ။ ကံ
Diego chachalo ဟုသူကပြောသည်
နံနက်ခင်းအချိန်မှာ LG g3 စည်းချက်အတွက် code အချို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်
Diego Chachalo သို့ပြန်သွားပါ
Edixon Quintero (@EdixonQuintero) ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ငါ့ကိုဖုန်းဆက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၌ပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ ဖုန်းသည်အဆင်သင့်အနေအထား၌အနက်ရောင်ဖြစ်လာပြီးပြန်လည်အသက်ဝင်စေရန် ၅ မိနစ်ခန့်ကြာသည်၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့ဖယ်ရှားနိုင်မည်နည်း။ ငါကတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်
Edixon Quintero (@EdixonQuintero) အားစာပြန်ပါ
Edixon quintero သည်သင်၏ဆဲလ်ကိုစက်ရုံမှထွက်ခွာ။ ပြန်တင်မည်၊ ချိန်ညှိချက်များသို့သွားပါ၊ ထို့နောက်ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းနှင့်ထိုနေရာမှအရန်သင့်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း (ဤတွင်သင်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်အဆက်အသွယ်များကိုအရံပြုလုပ်နိုင်သည်) စသည်တို့ဖြင့် LG Backup ဝန်ဆောင်မှုကိုသင်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ရိုက်ထည့်ပါသင်ဘာလုပ်ချင်သည်ကိုသာစစ်ဆေးရမည်၊ သင်၏ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်တွင်နေရာလွတ်များသာလိုသည်။ ၎င်းကိုသင်လုပ်ရန်မလိုချင်ပါကသင်၏ဆဲလ်တွင်ရှိသည့်အရာများကိုဆုံးရှုံးရန်စိတ်မဝင်စားပါက, သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ... ထို့နောက်စက်ရုံဒေတာပြန်လည်ယူခြင်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါ။ သင်၏သိုလှောင်မှုကိုဖျက်သိမ်းပါက (သို့) SD မှတ်ဉာဏ် (format) ကို format လုပ်ရန် tick ကိုမသွားပါနှင့်။
ငါ lg g3 ရှိတယ်၊ ဗင်နီဇွဲလားက။ ငါအံ့သြလောက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ဘယ်ဘက်ထရီကအရမ်းမြန်သွားတာလဲမသိဘူး။ ၅/၆ နာရီလောက်မှာဘက္ထရီကပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်သုံးနေတာမျိုး။ WhatsApp ကိုသာသုံးပါ။ ကျွန်ုပ်ဘက်ထရီအကြောင်းပြချက်များကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်သည်ဘာမျှမဒေါင်းလုပ်မချထားပါ။ ကျွန်ုပ်မသုံးစွဲပါက ၁၅ မီလီမီတာအောက် ၁၀၀% တွင်ဘက်ထရီရှိပါက၎င်းသည် 5% သို့ကျသွားပါလိမ့်မည်။ ငါဗင်နီဇွဲလားမှာနေတယ်။ LG ကုမ္ပဏီမရှိဘူး။ US ဖုန်းမှထွက်ခွာတဲ့အခါမှာသူတို့ဖုန်းကိုမဖုံးဘူး။ ငါ့နိုင်ငံကအခြေအနေတွေကြောင့်ဒေါ်လာမလုံလောက်လို့ဖုန်းပြန်ပို့ဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။ $
၁၀ မိနစ်အကြာတွင်ဘက်ထရီပမာဏသည်အလွန်လျှင်မြန်စွာကျဆင်းသွားသည်။ ငါမက်ဆေ့ခ်ျသို့မဟုတ်တစ်ခုခုပို့ရန်ကျွန်ုပ်ဖုန်းကို ၂- နာရီခွဲလျှော့ချသည်။ ရာခိုင်နှုန်းကျသွားသည်။ တစ်ကြိမ်ထိုးနှက်ခြင်းခံရသည်။ ကျွန်ုပ်အကူအညီလိုအပ်သည်။ the တိုင်းပြည်၏အခြေအနေများကြောင့်ကျွန်ုပ်ရရှိရန်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ အခြားဖုန်းတစ်လုံးအတွက်ဒေါ်လာများပို (: ((
ငါ lg g3 d855 16gb ရှိတယ်၊ ငါဘက်ထရီနဲ့ပြproblemsနာတွေရှိတယ်၊ အိပ်ချိန်တောင်မှတောင်မှအားကုန်သွားတယ်၊ ငါဘက်ထရီဆရာဝန်ကို install လုပ်တယ်၊ ဘယ်တော့မှ ၁၀၀% အားမသွင်းတော့ဘူး၊ ၉၉ မှာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီးအကြံဥာဏ်ပေးပါ
မင်္ဂလာပါ၊ တစ်စုံတစ် ဦး မှအကူအညီတောင်းလျှင်ကျွန်ုပ်သည် lg d855 ကိုကင်မရာအပလီကေးရှင်းမှမည်သို့တုံ့ပြန်မလဲ
အမှန်တရားကတော့ငါ Lg G3 ကိုဝယ်လိုက်တယ်။ အဲဒါကိုတတိယအကြိမ်မွမ်းမံခြင်းမလုပ်မချင်းငါအရမ်းပျော်တယ်။ မင်းရဲ့လက်ချောင်းတွေမီးလောင်ရာအထိအရမ်းပူလာတယ်။
ငါအထက်တွင်အကြံပြုခဲ့သည့်လုပ်ငန်းစဉ် (၂) ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ terminal သည်အတူတူပင်၊ အလွန်ပူပြင်းလာသည်၊ ၎င်းသည်ပေါက်ကွဲတော့မည့်ပုံရှိသည်။
ထို့အပြင်သူသည်အခြားသူများပြောသကဲ့သို့ lg g3 ကိုထုတ်ပယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှုတ်ချခြင်းများပြုလုပ်ရန်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာလုံး ၀ စိတ်ပျက်စရာပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ချီလီမှဆင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှာ lg g3 စည်းချက်ရှိသည်။ ပြproblemနာကကျွန်ုပ်ဖုန်းအရမ်းပူလာပြီးနှေးကွေးနေသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ၊ သို့သော်၎င်းတွင်အမှားတစ်ခုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောထားသည်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး ... တစ်ယောက်ယောက်ကကူညီနိုင်ရင် .... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟယ်လို!! lg g3 stylus အတွက်ကုဒ်ရှိပါသလား။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် pin ဆိုတာဘာလဲ။
Arturo Fuentes ဟုသူကပြောသည်
LG G3 Stylus ။ ဆော့ဖ်ဝဲ update ကိုကြောင့်ပိတ်ဆို့။
ငါဆော့ဖ်ဝဲ update ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုရတယ် ... ပြီးတော့ update လုပ်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ ...
ဒါပေမယ့်ဆဲလ်ဖုန်းကိုပိတ်ထားပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ ဆော့ဝဲလ်ကို update လုပ်နေသလိုပါပဲ .. ဒါပေမယ့်သူကဖွင့်ထားလိုက်တာ ... မိနစ် ၃၀ ကျော်ကြာပြီ။
(Yup .. ဒါကနေဆဲပဲ! .. 🙁
ငါဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး။ ဒါကြောင့် software update အတွက်တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားတာသေချာတယ်။ ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး
ဒီမွမ်းမံမှုမတိုင်မီကကဲ့သို့၎င်းကိုစွန့်ခွာရန်နည်းလမ်းရှိပါသလားသိလား။ .. ကျေးဇူးပြု။
Arturo Fuentes သို့ပြန်သွားပါ
hugo lapizco ဟုသူကပြောသည်
ဒီ lg g3 ဟာမကောင်းဘူး၊ အမှန်တရားကဒီဆဲလ်မှာအရမ်းစိတ်ပျက်တယ်
hugo lapizco အားစာပြန်ပါ
ငါပထမဆုံး g3 ကိုဝယ်လိုက်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူကအော်ပရေတာကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်တယ်။ ဘယ်တော့မှပြန်မဖွင့်ချင်ဘူး၊
ဒုတိယတစ်ခုကသူမညံ့သောကြောင့်နွေးလာသည်။ သူသည်ကြမ်းပြင်သို့မကျမှီတိုင်အောင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်လမ်းလျှောက်နေသည်။ အခုငါ့လက်ဖဝါးကနွေးနေပြီ၊
Beimak vargas negrete ဟုသူကပြောသည်
တစ်ခါတစ်လေကျရင်ကျွန်တော်ပိတ်ထားရမယ်၊ ဖွင့်လိုက်မယ်၊ အဲဒီမှာ signal ကတစ်စုံတစ်ယောက်သိလိမ့်မယ်လို့ထပ်ပြန်တယ်။
Beimak vargas negrete အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ တပတ်ကျော်ပြီပေါ့။ LG G3 D855 stube ကို wifi network ကိုတစ်နာရီခွဲလောက်အသုံးပြုနေတုန်းမှာသင်ပြနေတယ်။ ဖုန်းမှာလုံး ၀ မပူဘူး။ ဒါပေမယ့်မနေ့ညက ငါအင်တာနက်ကိုငါ့ရဲ့အခြားဆဲလ် galaxy ace 1x ကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါမင်း lg အဆိုးဆုံးကနေပူမထိတော့ဘူး။ ငါကုဒ်တွေကိုစမ်းကြည့်ပါ့မယ်။ မျှော်လင့်ပါတယ်။
James Pedroza ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ3GB lg g855 d16 ရှိတယ်၊ ဆဲလ်ဖုန်းကမျက်နှာပြင်ပေါ်ကပုံတွေကိုအမြဲတမ်းရှုံးနေတယ်၊ ​​အဲဒါကဒါကပြသမှုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ နောက်ဖန်သားပြင်တစ်ခုကိုငါစမ်းကြည့်တယ်၊ အလားတူအဖြစ်အပျက်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မွမ်းမံချက်တခုပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေ၊ ၎င်းကိုစက်ရုံမှပြန်လည်ထားပါ။ အားသွင်းထားပါ။ ယခုပုံကိုကျွန်တော်ဖွင့်တိုင်းပျောက်သွားသည်။ ခဏလောက်သော့ခတ်ပြီးလျှင်အသုံးပြုပါ။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိသည်။ အခြားအချိန်များတွင်မူ၎င်းသည်အမှားနှင့်အတူဆက်လက်ရှိနေသည်။ ဒီ hp ဆဲလ်ဖုန်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲ
james pedroza အားပြန်ကြားပါ
Ariadna Narvaez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဝိုင်ဖိုင်ဖတ်ရန်လျှောက်ထားမှုရှိမရှိသိလိုပါသလား။ G3 သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့် Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုမှမဖတ်သောကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးသည်အကွာအဝေးနှင့်မဝေးဟုတစ်ခါတစ်ရံတွင်လေယာဉ်ပျံမုဒ်ကိုဖွင့်ရန်နှင့်ပိတ်ထားရန်ကြိုးစားသည်၊ ဒီပြproblemနာအတွက်မည်သူမဆိုအဖြေရှာတွေ့ပြီလား။
Ariadna Narvaez အားပြန်ပြောပါ
ဟယ်လို။ ကျွန်ုပ်၌ g3 စည်းချက်ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် sim နှင့်ဖုန်းမှအဆက်အသွယ်များကိုတခါတရံကျွန်ုပ်မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်တွင် terminal lg g3 d851 နှင့်ပြaနာရှိသည်။ ငါအဲဒါကို pc နဲ့ချိတ်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော့် terminal ကိုမသိဘူး၊ မင်းက android lollipop ရှိဖို့မင်းကိုကူညီနိုင်မလား
Sergio Guerra ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်း၊ ကျွန်ုပ်၌ D851 မော်ဒယ်ရှိသည် 3845 # * 851 # နံပါတ်ကိုကျွန်ုပ်မသုံးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည်အပူလာပြီးမျက်နှာပြင်လည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီးအခမဲ့ဖြစ်နေသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်မည်လော။ ငါ့အီးမေးလ်က jrsigr@hotmail.com ငါသည်သင်တို့၏အကူအညီအတွက်ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်္ဂလာပါ
Sergio Guerra ကိုပြန်သွားပါ
ကောင်းသောညပါ။ ကျွန်ုပ်မှာဟွန်ဒူးရပ်စ်မှ LG G2 VS980 ရှိပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်အချိန်အကြာကြီးရပ်တန့်သွားသည်၊ ဖုန်းပူလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်အပူရှိန်မဟုတ်သည့်တိုင်၎င်းကိုပိတ်လိုက်သည်။
အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုကိုပိတ်ထားရန်လျှို့ဝှက်မီနူးအကြောင်းအချို့ဖိုရမ်များတွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့်ပြtheနာကဒီ menu ကမပေါ်လာဘူး။ * # 06 # နဲ့ imei ကိုတောင်မတွေ့ဘူး။
ငါကုဒ်ထည့်ပြီး IMM ကမှားတယ်လို့ပြောတယ်။ အကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြိုးစားပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ၊ ငါအရမ်းပူလာပြီးတစ်နာရီအတွင်းမှာအားကုန်သွားလို့ဘာလုပ်လို့ရလဲ၊
မင်္ဂလာပါ၊ တောက်ပမှုကိုတိုးပွားစေရန်သင်၏လှည့်ကွက်ကိုဖတ်ရန်ယခုပင်သနားပါ။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၎င်းသည်ဥရုဂွေးနိုင်ငံရှိVerizón usa မှတင်သွင်းသော "ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော၊ ဟော့စပေါ့ပရိုဂရမ်မရှိဘဲ" ရောင်းသည့်စျေးကွက်၏တစ်ဝက်ခန့်တွင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာငါကြိုးစားသောအခါသူတို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည် ... သို့သော် ထွန်းလင်းစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်သည် ၃ ကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ ထိုသူအားလုံးသည်ပုံကိုကောင်းစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်၊ သို့သော် "သက်မဲ့" ဖြစ်သည်။ ငါသူတို့မှာလည်းအဲဒီအားနည်းချက်ရှိမယ်လို့ထင်ပြီးအဲဒါကိုမဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဖုန်းကောင်းပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ LG G3 နှင့်ခဏတာဆက်နေပါမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးစားပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် ၁၃ လကြာ G3 ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့ကတည်းက browser, facebook နှင့်စသည်တို့သည်အလွန်ပူပြင်းလာကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ အဲဒါကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်သောအချက်သည်။ အချိန်မရှိတာကြောင့် movistar ကိုကျွန်တော်မတိုင်ပင်ဘဲအအေးခံပြီးဆက်သွားခဲ့တယ်။ အမှန်မှာ ၁၃ လအကြာ (၁ နှစ်အာမခံသက်တမ်းကုန်သွားပြီ) ကျွန်ုပ်ဓာတ်ပုံအချို့ရိုက်နေစဉ်ဖုန်းပျက်သွားကာအက်ပလီကေးရှင်း Watchdog Bark အစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင်ထွက်လာသည်။
ငါမှာအာမခံချက်မရှိတော့ဘူး၊ ပြtheနာကဘက်ထရီလား၊ ဖုန်းလားဆိုတာငါမသိဘူး၊ စက်ရုံအပြင်အဆင်ကိုပြန်ပို့ခြင်းဖြင့်၎င်းကို format ချပြီးပြီ၊ စနစ်စတင်ပြီ၊ နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းကိုပြန်လည်ပူနွေးလာခဲ့ပြီးအစိမ်းရောင် မျက်နှာပြင်နောက်တဖန်ထွက်လာ၏။
မည်သူမဆိုအဖြေတစ်ခုသိသလား။ အခြားဘက္ထရီဝယ်ဖို့လား သို့မဟုတ်အခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဝယ်ခြင်းကပိုကောင်းပါသလား။ ဘာအကြံပေးချင်လဲ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ။
Bladi aguiluz ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၌ Lg G3 VS985 4G ရှိပြီးလျှို့ဝှက်မီနူးကိုမဖွင့်နိုင်ပါ။ သင်ဘာအကြံပြုသနည်း။
Bladi Aguiluz အားပြန်ပြောပါ
ငါထွက်လာတာကအပူချိန်မြင့်မားမှုကြောင့်နောက်တစ်ခါထပ်ကြိုးစားကြည့်ရအောင် "နောက်တဖန်မတောက်ပနိုင်တော့ပါဘူး" လို့ရုတ်တရက်ကျောကုန်းပေါ်ကလူတွေကအရမ်းပူလာတယ်။ ပြီးတော့ဖြေရှင်းချက်ကတော့ဘက်ထရီကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားတာတောင်မှပဲ၊ ငါ့ဘက်ထရီကတိုတယ်ဒါပေမယ့်အလုပ်လုပ်တယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကရုတ်တရက်အရမ်းပူလာပြီးကျွန်တော့်ဆဲလ်ဖုန်းပိတ်ပြီးသင် reboot လုပ်ထားလို့မကောင်းဘူး။ သူ့ကိုမူရင်းတစ်ခုဝယ်ပါ နှင့်ယခုပြanyနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်တယ် !! LG ကသူတို့ပြောတာကသူတို့မှာဘက်ထရီအပူပြproblemနာရှိတယ်။ ငါသိပ်ယုံကြည်စိတ်ချလို့မရခဲ့ပေမဲ့ငါ့ကိစ္စအတွက်ပဲဒါပဲ။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်မှာ lg g3 d850 ရှိပြီး၊ မိုဘိုင်းကမကြာခဏပိတ်ခြင်း၊ ဗားရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးပါပြီ၊ ဘက်ထရီကိုပြောင်းလဲပြီးလေယာဉ်ပျံမှာ SIM ကတ်ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာလည်းအဲဒီအတိုင်းဆက်လုပ်နေပါတယ်။ ဖြေရှင်းနည်းရှိမရှိသိချင်တယ်
lg g3 stylus သည် 3845 # * 690 # ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ lg g3 သည်နှေးကွေးစွာစတင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည် samsung j1 mini ထက်သာသည်
Note5၏အကောင်းဆုံး Rom, Samsung Galaxy S7 Edge Plus အတွက် Note6port ဖြစ်သည်